Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Burnley… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 31 Jan 2021. Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Burnley, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Chelsea.
Daqiiqadii 40-aad Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay kabtanka kooxda ee Cesar Azpilicueta, oo caawin ka helay saaxiibkiis Callum Hudson-Odoi.
84 daqiiqo marka ay dheeshu mareysay Marcos Alonso ayaa ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Chelsea, kaddib markii uu caawun ka helay Christian Pulisic.
Balse ugu dambeyntuu ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay Chelsea kaga adkaatay kooxda Burnley oo marti ugu aheyd garoonka Stamford Bridge, Blues ayaa haatan ku jirta booska 7-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka.